झाक्रीले चि’हान खनेर पुन: संस्कारेको मृ’तक युवकको बुबाआमा मिडियामा, बाइक दूर्घटनामा पर्नु अगाडी उनले घरमा ल्याएका थिए ४ किलो मासु, र’म र बि’यर तर खानु पाएनन् (पुरा कुराकानी हेर्नुहोस) – SUDUR MEDIA
January 21, 2021 AdminLeaveaComment on झाक्रीले चि’हान खनेर पुन: संस्कारेको मृ’तक युवकको बुबाआमा मिडियामा, बाइक दूर्घटनामा पर्नु अगाडी उनले घरमा ल्याएका थिए ४ किलो मासु, र’म र बि’यर तर खानु पाएनन् (पुरा कुराकानी हेर्नुहोस)
बेलबारी । ६ बर्षअघि मोरङको कानेपोखरीमा सवारी दुर्घ’टनामा परी ज्या’न गुमाएका जीवन राईको आ’त्मा बेलबारीकी गौरी राईको शरिरमा पसेर दु’ख दिएको र त्यसलाई वनझाँक्रीले मुक्त गरेको विषय चर्चामा छ ।
चार दिन चार रात नसुती धामी बसेर ढ्याङ्रो बजाएपछि अन्त्यमा कसैले नसोचेको चमत्कार गरेको बताइएको छ । चारैतिर झार उम्रीएर केही थाहा नहुने अवस्थामा सबै गाउलेहरुले खनेको ठाउँमा मान्छे नभेटिए झाक्रीलाई त्यही खाल्डोमा पुरेर हिड्ने समेत दबाब दिएपछि झाक्रीले धेरैबेर ढ्याङ्रो बजाउदै जोखाना हेरेर एउटा ठाउँ देखाएपछी खन्न सुरु गरेका गाउलेहरु एकैछिनमा चकित बने । त्यहा खनेर हेर्दा कसैले नसोचेको दृश्य देखिएपछी सबै गाउलेहरुले धामीलाई माफी मागेर सम्मान समेत गरेका छन् ।
यो आधुनिक युगमा समेत यस्तो घटना घटेपछि धेरै चकित परेका छन । कतिले भने यसलाई हावा प्रचारबाजी समेत ठानेका छन । यसै बीच मृतक जीवन राईका आमा बुबासंग कुराकानी गरिएको छ । छोरा मोटरसाइकल दुर्घ’टनामा पर्नु अगाडी चार किलो मासु, र’म र बि’यर घरमा ल्याई राखेको तर खानै नपाई दु’खद घट’ना भएको आमाबुबा सुनाउछन ।
सबैले छोराको आ’त्माले गाउलेलाई दुख दियो भन्दा दुखि बनेका उनीहरु आ’त्मा र भु’तबारे खास विस्वास गर्दैनन् । यस विषयमा आमाबुवालाई समेत हामीले सोधेका छौं । के हो त वास्तविकता ? जीवनको आ’त्माले गाउँमा आं’तक सिर्जना गरेकै हो त ? के भन्छन त उनीहरु ? उनै मृ’तक जीवन राईका आमा बाबासंग गरिएको कुराकानीको भिडियो हेर्नुहोसः